भारत प्रशासित काश्मिरमा भएको झडपमा सातको मृत्यु
भारत, २ फागुन । भारत प्रशासित काश्मिरमा शनिबार भएको गोली हानाहानबाट पाँच जना शङ्कास्पद विद्रोहीको मृत्यु भएको एक सैनिक अधिकारीले बताएका छन् । झडपमा दुई जना सैनिकले सहादत प्राप्त गरेको
किन्सासा (कङ्गो), २ फागुन । एक विद्रोही समूहले आक्रमण गर्दा कङ्गोमा छ जनाको मृत्यु भएको छ भने उक्त समूहमा आएका आक्रमणकारीले १४ जना अन्य नागरिकलाई अपहरण गरी लगेका स्थानीय मानवअधिकारवादी
भ्यालेन्टाइन डे स्पेशलः यी हुन् प्रेमी–प्रेमिकालाई प्रपोज गर्ने तरिका
एजेन्सी । अहिले विश्वभर भ्यालेन्टाइन डे अर्थात प्रेम दिवसको मौसम सुरु भएको छ । यस क्रममा युवा युवतीहरुले एकले अर्कोलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने गर्छन् धेरैले स्वीकार गर्छन् त केहीले अस्वीकार
हट योग गुरुले आफ्नै विकलसँग हट गरेपछि…
एजेन्सी । योग गुरुलाई आदर्श पुरुष मानिन्छ । भारतका चर्चित योग गुरु रामदेबलाई संसारमै सम्मान तथा आदर्श पुरुषका रुपमा लिइन्छ । त्यसैगरी भारतमा जन्मिए र अमेरिकामा हुर्किएका हट योग गुरु
सहकर्मीद्वारा छको हत्या
साउदी अरेबिया, २९ माघ (एजेन्सी) । दक्षिणी साउदी अरेबियामा आफ्नै सहकर्मीले चलाएको गोलीबाट कम्तीमा ६ शिक्षकको मृत्यु भएको राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्ययले जानकारी दिएको छ । साउदी अरेबियाली शिक्षा विभागमा
भारतले असल साथी गुमायोः मोदी
काठमाडौं, २६ माघ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटमा देशका लागि दशकौं सेवा गरेका कोइरालाको निधनबाट कांग्रेसले
नक्कली रक्सीले २६ को ज्यान लियो
जकार्ता, २५ माघ । इन्डोनेसियामा कमसल खालको रक्सीले २६ जनाको ज्यान लिएको समाचार छ । इन्डोनेसियाको मध्यप्रान्त जाभामा अवैध रुपमा उत्पादित र कमसल खालको रक्सीले ती व्यक्तिको ज्यान लिएको समाचारमा
किन गरे घोडासँग बिहे ?
एजेन्सी । आफ्नो पाँच वर्षका छोराले आफ्नो बिहे घोडासँग गराइदिन माग गरेपछि उनका बाबुआमा तिनछक परे ।सुरुमा त केही सोँच्न पनि सकेनन्, लाजले भुतुक्क भए र छोरालाई हकारे पनि ।
राजधानीमा हेडमास्टरले छात्रासँग क्लासमै सेक्स गर्दा…
एजेन्सी । राजधानीको एक स्कुलका हेडमास्टर आफ्नै विद्यार्थीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । यो घटनाले गुरु चेलाको सम्बन्धलाई लज्जित बनाइदिएको छ भने अभिभावकमा त्रास सिर्जना गरिदिएको
जिम गर्ने बहानामा शारीरिक सम्पर्क राख्ने महिला को–को ?
एजेन्सी । मानिसहरू कहाँ कहाँ सम्भोग गर्छन् ? सम्भोग मानिसका लागि नभइ नहुने कुरा हो । एक सयमा पच्चिस जना बेलायतीहरुले व्यायामशालामा नै सेक्स गर्ने गरेको खुलासा भएको छ ।